Ithule, yesimanje futhi iseduze nolwandle!
siqasha ifulethi lethu elincane elingaphakathi endlini elinendawo yokungena ehlukene, enekamelo lokulala, igumbi lokugezela, igumbi lokuphumula elengeziwe kanye nendawo yokudlela. Ikhishi lifakwe efrijini, izinsiza zekhofi / itiye, i-microwave kanye ne-toaster. Azikho izindawo zokupheka. Ilondolo egaraji ingasetshenziswa ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Futhi uma unezingane - sinamathoyizi, isihlalo esiphezulu, umbhede futhi sisebangeni lokuya ogwini elinenkundla yokudlala enhle!
Sicela uqaphele - i-AirBnB iyatholakala ku-Level 3, sigcina nje konke ukuxhumana kuncane!
Amazwi ambalwa kithina - siwumndeni wamaJalimane - u-Bianca (42), u-Hendrik (40) noNkz Maja (7) omncane owathuthela e-Auckland cishe eminyakeni emihlanu edlule. Indlu yethu izungezwe luhlaza futhi isendleleni eya e-St Heliers Beach edumile kanye ne-Glover Park ephumulele. Isiteshi sebhasi esiya ngqo enkabeni yedolobha sisekude ngemizuzu nje futhi i-Uber ikubiza cishe u-$20 uqonde edolobheni!
Indlu yethu inaleli fulethi elincane eliziqukayo - sicela uqaphele ukuthi ikhishi linakho konke okudingayo ukuze uhlale (igedlela, umshini wekhofi, i-microwave, ifriji) kodwa azikho izinto zokupheka / usinki. Sikuhlinzeka ngamanzi ahlungiwe nsuku zonke futhi sihlanze izitsha zakho noma nini lapho kudingeka. Futhi ungakhathazeki ngokuthenga igilosa - siphinde sikunikeze ngezinto ezibalulekile ezifana ne-muesli, ubisi, itiye nekhofi kanye nokudla okulula.
Indlu yokugezela inobhavu kanye neshawa.
Ifulethi alizwani kahle nephansi lamapulangwe.
Ngaphezu kwalokho, uyakwazi ukufinyelela engadini yakho encane phambi kwefulethi enefenisha ethile yangaphandle ukuze ujabulele isimo sezulu esifudumele.
Phambi kwendlu yethu nawe uneyakho i-carpark.
Sicela uqaphele - ifulethi lingakwazi ukuhlalisa abantu abane, kodwa esikhundleni sabantu abadala abane kunalokho sincoma isib. umbhangqwana kanye nomunye omdala oyedwa, noma abadala ababili kanye nezingane ezimbili, njengoba sinekamelo lokulala elilodwa elinombhede wendlovukazi (1.53m) kanye negumbi lokuhlala elilodwa elinombhede usofa (1.50m).
Futhi, indlu yethu ingeyokugcina emgwaqeni owumqansa, futhi kunezinyathelo ezimbalwa eziya phansi efulethini - ngakho-ke azinconyelwe izivakashi ezinezinkinga zokuhamba.
Indawo enhle kakhulu - ethule, enezinkundla zokudlala namapaki kanye nolwandle imizuzu embalwa nje!
Ungangena kalula kuleli fulethi ngaphandle kwethu futhi sizokuhlonipha ngokuphelele ubumfihlo bakho, kodwa sicela ukhululeke ukuxhumana nathi uma udinga okuthile. Uzothola imanuwali efulethini enikeza imininingwane yakho eyengeziwe mayelana ne-AirBnB, Wifi, Auckland njll.
Ungangena kalula kuleli fulethi ngaphandle kwethu futhi sizokuhlonipha ngokuphelele ubumfihlo bakho, kodwa sicela ukhululeke ukuxhumana nathi uma udinga okuthile. Uzothola imanuwal…